प्रधानमन्त्रीको अस्पताल बसाइ लम्बिने | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार प्रधानमन्त्रीको अस्पताल बसाइ लम्बिने
प्रधानमन्त्रीको अस्पताल बसाइ लम्बिने
२०७६, २४ फाल्गुन शनिबार ०९:२६
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई करिब १० दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालको लिभर ट्रान्सप्लान्ट आईसीयूमा राखिने भएको छ । धपेडी नहुने र सुरक्षितसाथ उच्च चिकित्सकीय निगरानीमा बस्ने वातावरण हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अस्पताल बसाइ लम्ब्याउने मनस्थितिमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू रहेका हुन् ।
६९ वर्षीय प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार आईसीयूमा हिँडडुल गराइएको थियो । भात र मासुको झोल दिइएको छ । बिहान उनले चिया–बिस्कुट खाएका थिए । यस्तो शल्यक्रियामा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै बिरामीलाई हिँडडुल गराइन्छ । ‘यही गतिमा सुधार हुँदै गयो भने ७ देखि १० दिनसम्ममा उहाँलाई डिस्चार्ज गर्छौं,’ प्रधानामन्त्रीकी निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले भनिन्, ‘उहाँको स्वास्थ्य स्थिति ठीक छ । स्थिर छ ।’ प्रधानमन्त्रीको शरीरले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछिको शरीरले देखाएको प्रतिक्रिया र सुधारको गति सन्तोषजनक रहेको डा. शाहले बताइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शल्यक्रियापछि पहिलो पटक शुक्रबार चिकित्साकर्मीबाहेकका सँग फोनमा कुराकानीसमेत गरेका छन् । डा. शाहले नै आफ्नो फोनमा प्रधानमन्त्री र प्र्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालबीच कुराकानी गराएकी थिइन् । करिब दुई मिनेटको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ठीक रहेको जानकारी दिँदै आफू छिट्टै काममा फर्किने बताएका थिए । अस्पतालमा भएको बिरामीको प्रोटोकलअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई हाल मोबाइल फोन दिइएको छैन । बिरामीले के गर्ने के नगर्ने प्रोटोकललाई प्रधानमन्त्री ओलीले समेत पालना गरिरहेको डा. शाहले बताइन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
Previous articleकोरोना संक्रमितकाे संख्या १ लाख नाघ्याे : ३४ सय बढीको मृत्यु, ५७ हजार बढी निको भए
Next articleसुन निक्षेप राखेको प्रमाणपत्रबाट पनि कर्जा पाइने